Funda umthandazo ukukhusela ububi. ? [Unamandla]
Funda umthandazo ukuthintela ububi. Ukusukela ekuqaleni kwexesha, ububi busoloko bumtshutshisa umntu. Olu luvo lubi olukhoyo kwi el mundo izisa imeko yokuqwalaselwa, esoyika yonke into rhoqo. Bonke obu bubi bomntu busikhokelela ekubeni sifune ukukhuselwa kwetyala ukunqanda into embi ukuba ingenzeki kuthi. Inye umthandazo wokuphelisa ububiIsebenza njenge-amulet eyila ikhaka kwaye isikhusele.
1 Funda umthandazo ukuthintela ububi
1.1 Umthandazo wokuqala wokuphelisa ububi
1.2 Umthandazo wesibini wokuphelisa ububi
Inyani yile yokuba mva nje asiziva siziva sikhuselekile xa sihamba. Ngonaphakade singqongwe ngumona, intiyo nogonyamelo. Utshaba luhlala lukufutshane lulindele ukusibamba.
Ngalo lonke ixesha kufuneka sihambe kunye nabanye abantu okanye sisebenzise ii-charms ukuze kungabikho nto yenzekayo kuthi. Ukukunceda ukudala ukhuseleko, sahlula ezimbini imithandazo yokuphepha ububi. Banamandla amakhulu. Soloko usenza enye yazo kwaye uzive ukhuselekile xa ushiye ikhaya. Kholwa nje kwaye uthethe Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle ekugqibeleni
Umthandazo wokuqala wokuphelisa ububi
Thixo uBawo uSomandla, ndiphambi kobukho bakho ngalo mzuzu kuba ndikholelwa kwilizwi lakho nakumandla abhalwe ngegama likaYesu, ndiyathandaza ngegama likaYesu, ndigxotha bonke ububi ndingabamkeli ububi ebomini bam. ukuba yonke into ihamba gwenxa, isibetho, umona, isiqalekiso, iliso elikhulu. Ndifuna ukuba uphume ngamandla negunya legama likaYesu, Nkosi Thixo, enkosi, kwaye ndizifumana iintsikelelo zakho noxolo ebomini bam, Amen.
Umthandazo wesibini wokuphelisa ububi
“Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele, phumani.
Nkosi, nika uxolo kwabo banokholo, ukuze kuzaliseke amazwi omprofeti athi: "Yiva imithandazo yomkhonzi wakho nabantu bakho bakwaSirayeli."
Zingelosi ezingcwele, zivuma ngonaphakade ubuqaqawuli boThixo Osenyangweni uThixo! Ingelosi eyintloko uMichael, ophumeleleyo woyisa amandla angaphantsi! Ingelosi uSaint Raphael, isikhokelo sikaTobias oselula entlango! Ingelosi enguGabriyeli, owazisa iNtombikazi uMariya ukukhulelwa koNyana, iLizwi likaThixo uYise!
Izibane ezikhanyayo, ngonaphakade kanaphakade, zijikeleze itrone yOsenyangweni, ukuba zidunyiswe ngonaphakade. I-Anael, i-Asrael, iGamaliyeli, uSamuel, uZakariyeli, u-Uriyeli, oomoya abasixhenxe abanyulu, izikhanyiso ezisixhenxe, ubuqaqawuli besibhakabhaka, makukhanye ukukhanya kwam, ukhuseleko lwam, amandla am, isibindi sam, ukuze ukwazi ukujongana nabo bonke ububi, bonke ububi, zonke iintshaba.
Uyandibaleka, endlwini yam, nosapho lwam, oomoya abakhohlakeleyo, abanomona, abenzi bobubi, abahanahanisi nabazifunayo.
I-Seraphim, Cherubim, iTrones, i-Domination, i-Powers, ii-Angelo ezinkulu kunye neeNgelosi, susa kum, usapho lwam, ekhayeni lam imimoya ethunywe nguSathana, imimoya ehenda, osiphambukisa ngokulungileyo aze asirhuqele kwintshabalalo kanaphakade.
Ke makube ngoku, nangonaphakade.